Ukuhlukunyezwa ekulethwa kuvamile, kungakhathaliseki ukuthi odokotela bazama kanjani ukuwagwema. Akuzona njalo ukuthi abesifazane baziphatha ngendlela efanele ngesikhathi sokulwa, hhayi njalo ingane iziphatha njengoba ibhaliwe ezincwadini zababelethisi - kunezikhathi eziningi ezingalindelekile. Yingakho ukulimala kwenzeka, ngenhlanhla, akuyona into embi kakhulu futhi akudingi ukwelashwa okude nokuvuselelwa.
Abaningi abakhulelwe bayalinda, kodwa ngesikhathi esifanayo bayesaba isikhathi lapho bebona ingane yabo. Lokhu akumangazi, kunikezwa ukuthi kubi kakhulu futhi kubuhlungu, kungamanga ukuthi ukubeletha kwenzeka. Kodwa abanye besifazane bakhohlwe ngokuphelele ukuthi akuzona nje kuphela, kodwa futhi izingane zabo kufanele zihambe ngale ndlela enzima, ezibandakanya ukulingwa okujulile, uma kuncike kakhulu ekusebenzeni kwabantu abangabazi - odokotela.
Ngempela, uma ucabanga ngakho, ngesikhathi sokubeletha, izingane kufanele zibe esimweni esibuhlungu kakhulu. Emasontweni angaba ngu-40 umntwana wayehlala esibelethweni esifudumele, ezwa ukushaya kwenhliziyo kamama, adle, aphefumule futhi alahle imfucuza yokuphila emgqeni we-umbilical - ngezwi, bekunemibandela ekhululekile kakhulu. Kodwa manje indlu yokuhlala endala iyayiphonsela phansi, ihlukumeze. Futhi ukuze ubone umhlaba omusha, udinga ukuhamba ngendlela encane. Phakathi nalolu hambo, amathambo omntwana wengane ayaphuma, futhi ubangela unina umonakalo omkhulu. Ngokuvamile, le ndlela ayinakubizwa ngokuthi iyimnandi, nakuba ikhulelwe ngendlela enjalo. Akumangalisi ukuthi kungahambisana nezinhlobo ezahlukene zokulimala.
Ukulimala kokuzalwa kwezinsana
Naphezu kwayo yonke imvelo yenkambiso, kaningi into ayifuni neze njengoba kufanele. Ngenhlanhla, ukuthuthukiswa kwemithi kungasiza abesifazane uma kunezinkinga. Kodwa futhi akunakwenzeka ukuthembela odokotela - abasibo onkulunkulu, futhi owesifazane ekubelethweni kufanele aziphathe ngendlela efanele, yena, ngaphandle kokuguqula yonke imithwalo yemfanelo kubachwepheshe.
Umqondo wokuhlukunyezwa ekubelethweni kwengane kuhlanganisa uhlu lonke lwezimo ezingenzeka ukuthi ziwumphumela wamanye ama-pathologies noma ngesikhathi sokukhulelwa noma ngesinqumo esivela kuso. Lokhu kufaka:
Ukusakaza kwe-cerebral engafanele;
Ukulimala emithanjeni yegazi nemisipha;
Ama-fractures, amaqhekeko, amathambo ahlukaniswayo;
Hematomas ezitho zangaphakathi;
Konke lokhu kuzwakala kunesabekayo, ikakhulukazi uma ucabanga ukuthi lena indoda encane kakhulu, edinga ukunakekelwa okuningi ngisho nasesimo sakhe esivamile. Ngenhlanhla, ukulimala okunzima kwezinsana akuvamile. Kodwa kungani zenzeka ngisho na? Kunezinketho eziningi.
Izimiso zokuthola ukulimala ohlelweni lokubeletha zingaba ziningi. Phakathi kwabo, ukukhubazeka kwenkambo yokukhulelwa kuvelele, njengokungafani phakathi kokulingana komntwana wesisu nokubeletha, isethulo esingavamile, ukulimala kwentambo, ukusebenza kwesimo esingalungile sekhanda ku-pelvis encane. Ngaphezu kwalokho, izizathu zingase zibe nomthelela ophezulu noma ophansi wokudiliva, ukuvuselela, isikhundla esingavamile noma izenzo zomama.
Ngesinye isikhathi ingxenye yomthwalo wemfanelo iwela odokotela abasebenzisa izindlela ezingasebenzi futhi ezinobungozi njengokukhipha umfutho noma ukusetshenziswa kwe-forceps. I-obstetric twist ayinalo iqhaza ekulondolozeni impilo yengane, kepha, ukwethembeka, akunakwenzeka ukuba kwenziwe ngaphandle kwesidingo esikhulu. Futhi ukukhuluma ngokujwayelekile, noma yikuphi ukwehluka okuvela esimisweni sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa nokubeletha kungabangela ukulimala okufanayo. Ngenhlanhla, lokhu, njengombuso, kutholakala khona lapho, lapho kuhlolwa i-neonatologist, okusho ukuthi izinyathelo ezidingekayo zingathathwa ngokushesha.
Umama angenzani ukuze avimbele lokhu kwenzeka kumntanakhe? Okokuqala - ukuya ezifundweni zabafazi abakhulelwe bese uthola ukuthi ukubeletha kwenzekani nokuthi kungani kubaluleke kakhulu ukulalela ababelethisi nodokotela. Futhi-ke, akufanele ushiye isigaba sokugcina, uma odokotela bephikelela kuso, kungasiza ekugwemeni izinkinga eziningi.
Emntweni osanda kuzalwa, ngesikhathi sokubeletha, umzuzwana ufika lapho ikhanda selishiyile, futhi amahlombe ayengakabi khona. Futhi lapha kusuka kumbelethisi udinga ukunakekelwa okukhethekile kanye nesisa. Uma uqala ukukhipha ikhanda kakhulu kanzima noma uvumele ngisho nokujikeleza okuncane eduze kwe-axis, ungalimaza kalula amathambo amancane. Futhi kungenzeka ngokuqondile ukuphulukisa lokhu kukhwabanisa ekubonisweni kwe-pelvic ngokucindezela ngokweqile. Eqinisweni, ukuphuka kwe-collarbone engane usana kungenye yezinhlekelele ezibelethwe kakhulu. Ngokusho kwedatha yesimanje, ithola izingane ezingu-11-12 ngaphandle kwezingu-1000. Ngokuvamile zihambisana nezinye ukulimala: i-paresis nokukhubazeka kwamaphethelo, ukuqubuka komzimba we-sternocleidomastoid, ukuhlukana kwamanye amathambo.
Naphezu kokuthi ukuhlukunyezwa okunjalo akukwazi ukutholakala ngesikhathi sokuhlolwa okuyinhloko, kuvame ukuphawula emahoreni wokuqala noma ezinsukwini. Emcabangweni wokuthi kukhona ukuphuka kwe-collarbone engane, kungaletha izimpawu ezilandelayo:
Ukwandisa ukuphumula kwengane, ukufisa ukudla okuncane nokunciphisa umzimba;
Ukuvuvukala okuncane endaweni yehlombe;
Isikhundla esingenasisekelo sekhanda;
Ukuphakama kwesinye samahlombe ngaphezulu kwesinye;
Ukudumala kwesinye sezandla.
Ukuhlola odokotela abasola bangasebenzisa ucwaningo lwe-X-ray oluzokhuluma ngokungaqondile, kungakhathaliseki ukuthi kukhona ukuphuka futhi kunzima. Ngokuvamile lokhu kunganqunywa ngosizo lwe-palpation, kodwa kulokhu kunengozi yokukhipha izingcezu futhi kukhulise umonakalo. Ngakho-ke naphezu kokujwayelekile ukuthi, umuntu akakwazi ukuthatha njengokungaboni kahle ukuphulwa kwe-collarbone ezinsana ezisanda kuzalwa.
Ezinganeni, ikakhulukazi ezincane kakhulu, amathambo ahlangana ngokusheshisa, ngoba asathambile. Futhi iningi lezinhlanzi azidingi noma yiziphi izinyathelo ezikhethekile nhlobo, ngaphandle kokuthi ukunakekelwa okwedlulele ekuziphatheni kwengane, ukwelashwa okucophelela nokukhwabanisa. Ezimweni ezingavamile, kuyadingeka ukuthi kungabi khona impela, lokho kungukuthi ukukhubazeka kwembilini kusetshenziswe ukugqoka okukhethekile kanye namathayi. Okokugcina, uma kunesizungu kakhulu, kungase kudingeke ukuthi kusetshenzwe umsebenzi ngesikhathi lapho lezi zingcezu zizohlangana ndawonye, kodwa kungenzeka ukuthi lokhu akunakwenzeka, ngoba ukuphuka okugcwele kwe-collarbone enganekuzalwa kuyinto engavamile kakhulu. Imiphumela yalesi sigameko, noma kunalokho, ukungabi khona kwabo, namathemba okuphilisa, ngenhlanhla, cishe njalo ikhuthaza. Ngakho ungakhathazeki kusengaphambili kwesikhathi.
Ukwelashwa kokuphuka okungaqondakali ngokuvamile akuhlotshaniswa nanoma yikuphi ubunzima - cishe ngesonto esakhiweni somonakalo, okuthiwa yi-corn, okwenza ekugcineni kuguquke zibe amathambo amathambo, ukuqedela inqubo yokuvuselela. Uma kube khona ukuthuthwa kwezingcezu nokulimala okungeziwe, kunzima ukukhuluma ngamathemba - esimweni ngasinye, kungokwabo, ngakho-ke, umuntu kufanele alalele izincomo zodokotela oya khona.
Ukuphulwa kwe-collarbone entsheni ngokuvamile akubanga ukumkhathazeka okujulile, ngoba ngisho nokuncane okuthinta ukuhamba kwesitho. Noma kunjalo, ngisho noma ithambo lonakaliswa kakhulu, ngokuvamile ukuhamba ngokugcwele kuvuselelwa ngaphakathi kwesonto noma amabili. Noma yiziphi iziphambeko zokuzithokozisa ezihambisana nokuhlukunyezwa nazo zihamba ngokusheshisa. Ngesilinganiso esanele sokuqiniseka singasho ukuthi esimweni esijwayelekile, ukwephulwa kwe-collarbone enganeni engenazo imiphumela ezayo esikhathini esizayo.